यी महिलालाई एउटा इमान्दार श्रीमान चाहियो !! इच्छा हुनेले सिधैं सम्पर्क गर्नुहोस् — newsparda.com
यी महिलालाई एउटा इमान्दार श्रीमान चाहियो !! इच्छा हुनेले सिधैं सम्पर्क गर्नुहोस्
सम्पर्कको लागी तलको यो लिन्क खोलेर तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस एउटा आमालाई आफ्नो छोरीका लागि केटा खोजेको धेरै पटक देखिन्छ । फिल्म,टीभी,वा आफ्नै आमालाई पनि हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं अहिले एउटा छोरीले आमाका लागि केटा खोजीरहेको खबरले बजार तताएको छ । आमा छोरीको एउटा तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । एउटा यस्तो उमेर हुन्छ जुन हरेक आमाका लागि आफ्ना छोरा छोरी पुर्ण रुपमा सेटल बनाउनु चि’न्ताको विषय बन्न जान्छ ।
तस्बिरमा आमा/छोरी,तर कति पटक तपाईंले छोरी वा छोरा आफ्ना बाबुआमालाई व्यबस्थित वा सेटल गर्ने चिन्तामा डुबेको देख्नु भएको छ ? कतै तपाईंले छोरी वा छोरालाई आफ्नो आमा बुबाको लागि जीवनसाथी खोजिरहेको देख्नु भएको छ ? जवाफ ‘कहिल्यै’ वा १,२ पटक यस्तै सुन्न पाइन्छ । ट्विटर मा एक जना आस्था वर्मा नाम गरेकी केटीले आफनी आमाका लागि केटा खोजी रहेकी छन् ।
उनले रक्सी नपिउने,शाहाकारी र ५० बर्षीया वर चाहियो भन्दै आफ्नो र आमाको तस्विर पोष्ट गरेकी छन् । प्रतिकृया हरुमा तपाईका लागि केटा पर्दैन भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले आफु सम्बन्धमा रहेको भन्दै जवाफ फर्काएकी छिन् ।छोरीले एकल आमाका लागि गरेको यो कार्य वास्तवमा प्रशंसा गर्न लायक छ । यदी तपाई पनि उनले भनेको जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी छोरीलाई सिधैं म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ ।सम्पर्कको लागी 👇️यो लिन्क खोलेर गर्नुहोस https://samacharpostdainik.com/ बाट साभार गरिएको ।